Semalt ကျွမ်းကျင်သူ Hashtag စျေးကွက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမဟာဗျူဟာများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
အကယ်၍ သင်သည် Instagram သို့မဟုတ် Twitter ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုပါက hashtag များသည်သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုမဟာဗျူဟာအရအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ပြနာပေါ်လာသည်။ ယနေ့ hashtags နေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ရောင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့သူတို့ကိုသင်လျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူး။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်း၊ သင်၏ SEO ကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ သင်၏စျေးကွက်ကို ဦး တည်ခြင်းနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုရရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် hashtags များသည် # နိမိတ်လက္ခဏာနောက်တွင်ပေါ်လာသောစကားလုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်ဟာပိုကောင်းတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာစိတ်ထားရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်သူတို့ကို metadata tags အဖြစ်သိနိုင်သည်။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်စေရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုအဖြစ်သင်သိလိမ့်မည်။
Semalt အကြီးတန်းအရောင်း မန်နေဂျာ Ryan Johnson သည် hashtags အတွက်အဓိကစျေးကွက်နည်းဗျူဟာအချို့ကိုလေ့လာသည်။
၁။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး hashtags
ဤရွေ့ကားသင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပရိုမိုးရှင်းမြှင့်တင်ရန်သင်အသုံးပြုတဲ့တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည်။ ရောင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အမှတ်တံဆိပ် hashtag ကိုဖန်တီးရမည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြီး၎င်းကိုသင်၏လက်မှတ်တံဆိပ်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ သင်ကလူတွေကိုသူတို့ကိုအသုံးပြုစေတာနဲ့၊ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင့်အတွက်ရောင်းပေးလိမ့်မယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး hashtags ကိုသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အထူးပြုလုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်စတိုးဆိုင်တွင်မြှင့်တင်ရေးတစ်ခုရှိပါကဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်တံဆိပ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ လူတွေကိုလူတွေကိုအသုံးပြုစေခြင်းအားဖြင့်၊ သင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်နိုင်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အမည်ကိုသင်၏မြှင့်တင်ရေးအတွက်ထူးခြားနေသရွေ့အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
2. Hashtag ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ခေတ်ရေစီးကြောင်း hashtag ကိုလူကြိုက်များမှုများစွာရရှိသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သူတို့ကအစဉ်အမြဲအချိန်မှန်၌ပြောင်းလဲ။ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ဆက်နွှယ်သောလမ်းကြောင်းတစ်လမ်းကိုသင်မြင်သောအခါ tag ကို အသုံးပြု၍ သင်ပါဝင်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာမှာအဲဒီ tag ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်း hashtags အမြောက်အများပေးပို့ခြင်းနှင့်အတူအလွန်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောလမ်းကြောင်းများစွာကိုသင်တင်ထားလျှင်၎င်းကိုနိမ့်သောတံဆိပ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ အချို့ကိစ္စရပ်များမှာ၊ သင့်ရဲ့ Twitter အကောင့်ကိုတောင်ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်တယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ တွစ်တာနှင့်ဂူဂယ်လ် + သည်သတင်းအချက်အလက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့်၎င်းတို့၏စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ခေတ်စားသောအကြောင်းအရာများကိုပြသသည်။
3. Hashtags အကြောင်းအရာ
ဤအရာသည်သင်၏ရေးသားချက်များတွင်သင်အသုံးပြုသော hashtag များဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာများသောအားဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မရှိကြပါဘူး။ သူတို့ကသိပ်ပြီးလူကြိုက်များတဲ့၊ ၎င်းတို့သည်သင်တင်ပို့သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်နွယ်လေ့ရှိသော hashtags များသာဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအရာသည် hashtags သုံး၍ အချို့သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေသောသုံးစွဲသူများကိုပစ်မှတ်ထားပြီးသင်၏ရေးသားချက်များ၏ SEO ကိုတိုးတက်စေသည်။
သင့်ရဲ့ content hashtags ကိုထိရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ဖောက်သည်တွေလိုထင်ရမယ်။ သင်၏ hashtags များသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်နှင့်ချိတ်ဆက်မှသာအောင်မြင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏စီးပွားရေးသည်တည်နေရာအခြေပြုပါကသင်၏ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလူကြိုက်များစေသည့် geo-segmented hashtags များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။